Iflethi okanye indlu ekwicomplex ekwicomplex enepuli - i- - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex ekwicomplex enepuli - i-
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguManju
Iflethi okanye indlu yethu ekwicomplex ekhanya ilanga yindawo entle yokudidiyela izinto zodidi oluphezulu nezitofotofo, ikhaya elikude nekhaya. Sizungezwe ziinduli ezintle zaseAravalli, sisondele kwindalo. Indlela elihonjiswe ngayo ikhaya lizimisele ukwenza umhambi akwazi ukuzola nokuzola.
Le ndawo inazo zonke izinto eziyimfuneko eziquka umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, iTV, inkqubo yomculo, ifriji, i-microwave, into yokucoca amanzi, i-geyser, kunye nebhalkhoni edityanisiweyo kunye nokufikelela kwipuli.
Iflethi okanye indlu ekwicomplex ikwicomplex eneeyure eziyi-24 zokhuseleko. Malunga nendawo:
IGUMBI LOKULALA IGUMBI LOKULALA
linebhedi enkulu kunye nesofa enezihlalo eziyi-2. Igumbi lineewodrophu ezinendawo yokugcina izinto ezininzi. Igumbi line-AC kunye neefestile ezinkulu ezijonge kwi-Arabvallis eziqinisekisa ukuba kukho umoya otyibilikayo.
IGUMBI LOKUHLALA IGUMBI LOKUHLALA
linesofa etofotofo ene-TV kunye nenkqubo yomculo yokuzonwabisa. Le ndawo ine-AC kunye neefestile ezinkulu ezenza kungene umoya okhululekileyo. Le ndawo inebhalkhoni apho iindwendwe zinokonwabela ikofu yazo yasekuseni okanye iti yasebusuku, ejonge iinduli. Igumbi lokuhlala linetafile yokutyela esebenza njengendawo yokusebenzela.
Iflethi inekhitshi elinento yonke elinezinto zokupheka. Ikhitshi linesitovu, i-microwave, i-geyser yamanzi ashushu, ifriji, i-mixer, kunye nendawo yokugcina izimuncumuncu.
IGUMBI LOKUHLAMBELA IGUMBI LOKUHLAMBELA
linamanzi ashushu nabandayo iiyure eziyi-24. Sikwabonelela nezi zinto zilandelayo kwiindwendwe zethu:
- Amashiti acocekileyo -
Iitawuli neetawuli zezandla
- I-shampoo ne-shower gel
Undwendwe lunokufikelela kwezi zinto zilandelayo
- Ipuli yokuqubha -
- Indawo yokupaka
Iindwendwe zinokukhetha ukupheka ukutya kwazo eflethini. Iflethi inekhitshi eliqhelekileyo elisebenza ngokupheleleyo elinazo zonke izinto ezifunekayo ekhitshini. Imifuno ephilayo inokufunyanwa ngabantu abathengisa imifuno ngaphandle nje kweflethi okanye indlu ekwicomplex.
Kukho ivenkile yokutyela efumanekayo kwiflethi okanye kwindlu ekwicomplex apho iindwendwe zinokutya khona/zifumane ukutya.
Kukho ii-dhabas ezahlukeneyo kufutshane nendlu apho iindwendwe zinokufumana ukutya kwaseRajasthani kunye nomntla weIndiya.
Kukho ivenkile yewayini engaphantsi komzuzu omnye xa uhamba ngeenyawo ukusuka eflethini.
Iflethi ime kwiilali zaseKavita kwi-National Highway 27.
Le ndlu ikumgama wemizuzu eyi-20 xa uqhuba (10kms) ukuya kwiziko lesixeko sase-Udaipur.
Le ndlu ikumgama wemizuzu eyi-30 xa usuka kwisikhululo seenqwelo-moya iMaharana Pratap.